ကလေးတိုင်းကို ပြောပေးဖို့ လိုအပ်တဲ့ ကြည်နူးဖွယ်ဖြစ်သော စကားလုံးများ » Today Bago
HomeLifestyleကလေးတိုင်းကို ပြောပေးဖို့ လိုအပ်တဲ့ ကြည်နူးဖွယ်ဖြစ်သော စကားလုံးများ
ကလေးတိုင်းကို ပြောပေးဖို့ လိုအပ်တဲ့ ကြည်နူးဖွယ်ဖြစ်သော စကားလုံးများ
ကလေးတိုင်းကို ကြည်နူးဖွယ်ဖြစ်သော စကားလုံးများ ကိုပြောပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကလေးတွေကို ပြောနေတဲ့ စကားလုံး ထောင်ပေါင်းများစွာအနက် သူတို့ကို ပိုပြီးကြံ့ခိုင်သူ၊ ပိုကြင်နာတတ်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုပိုရှိသူ
တစ်ယောက်ဖြစ်စေမယ့် စကားစုအတော်များများရှိပါတယ်။ သူတို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ စကားလုံးများ ရွေးချယ်ပြောပေးခြင်းက သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ဖွံဖြိုးတိုးတတ်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး သူတို့ကို ပျော်ရွင်စေပါတယ်။
၁။ ကလေးများရဲ့မသိစိတ်က သူတို့မကောင်းတဲ့ အပြုအမှုနှင့်အတူ လူကြီးတွေကို စမ်းသပ်ချင်ကြပါတယ်။ “သားဒီလိုလုပ်ရင်တောင် အမေချစ်မှာလား” လို့ သူတို့ကမေးလျှင် အဖြေက ပြတ်ပြတ်သားသားဖြစ်ရပါမယ်။ “ဒါပေါ့ ! သားရှိနေရင် အမေပျော်တယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က ကလေးတွေအားလုံးထဲက ရွေးချယ်ရလျှင် သားကိုသာ အမေရွေးချယ်မှာပါ”
ဒါက သင့်ကလေးရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးစေမယ့် နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
၂။ “အမေ အချစ်ဆုံး သားလေး” ဒီကြည်နူးဖွယ်စကားလုံး၃လုံးက သင့်ကလေးရဲ့ ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အရေးပါပါတယ်။ အဲ့လိုစကားလုံးတွေနဲ့အတူ
လုပ်ရပ်များကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ သူတို့နဲ့ အတူတူအချိန်ဖြုန်းခြင်း၊ ကစားခြင်း၊ ရယ်မောခြင်း၊ ကျီစယ်ခြင်း၊ ပူဖောင်းမှုတ်ခြင်း၊ သင့်ကလေးကိုပွေ့ဖက်ခြင်း၊ ပြဿနာများကို ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက သူတို့ကို ထောက်ပံ့ပေးရပါမယ်။
၃။ “သားရဲ့အခန်းက သန့်ရှင်းနေတာပဲ” “၀ိုး! အိပ်ရာသိမ်းထားတာပဲ!” “သားအ၀တ်တွေကို ခေါက်ထားတာ သပ်ရပ်လိုက်တာ!” လုပ်ထားတာကောင်းတယ်” ထိုကဲ့သို့စကားလေးများက သင့်ကလေးကို ယုံကြည်မှုနှင့် သင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုကို ခံစားရအောင် ကူညီပေးပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို တန်ဖိုးထား အသိအမှတ်ပြုတာကြောင့် နောက်လဲသန့်ရှင်းအောင် ပြုလုပ်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ထပ်လုပ်ဖို့ သဘောကျတဲ့ အပြုအမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတာကြောင့် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဘယ်အရာမဆို သာယာသောခံစားချက်များနှင့် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
၄။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးက လူသားတွေဖြစ်ပြီး အမှားတွေလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။မိမိကကိုယ့်သားသမီးပေါ်မှာ အမှားတစ်ခုခုလုပ်မိခဲ့ရင် သင့်ကလေးဆီက ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို မေးမြန်းဖို့နှင့် သူတို့ကို ၀န်ခံဖို့ သတ္တိရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက သူတို့အပေါ်မှာ လေးစားမှုနဲ့ တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာ သူတို့ကို သိစေပါတယ်။ ပြီးနောက် အမှားတစ်ခုလုပ်မိခဲ့လျှင် ထိုလုပ်ရပ်တွေကို ပြန်မလုပ်ဖို့နဲ့ ခွင့်လွှတ်ဖို့ မေးမြန်းသင့်တယ်ဆိုတာကို သူတို့ကို သင်ပေးပါ။
၅။အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ဖိနှိပ်ခြင်းက neuroses နှင့် phychosomatic ရောဂါများကို ဦးတည်နေပါတယ်။ ကလေးမှာ
စိတ်ဆိုးရမယ့် အခွင့်အရေး ရှိပါတယ်။ ထိခိုက်မိလို့ငိုတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် အရုပ်တွေ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါ ပူဆွေးသောကမရောက်စေဖို့ သူတို
့ကို ငိုခွင့်ပြုရပါမယ်။ မိဘများရဲ့တာဝန်က ဘယ်သူ့ကိုမှ ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ မိမိစိတ်ခံစားမှုကို ဖော်ပြဖို့ ကလေးတစ်ဦးကို ဆုံးမသွန်သင်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ ကလေးတစ်ယောက်ကို ရဲရင့်စေဖို့ သင်ပေးပါ။ ငါ့သားလေး ပြုတ်ကျသွားမယ်၊ တစ်ခုခုဖြစ်သွားမယ်လို့ စိုးရိမ်ပြီး ကလေးရဲ့လုပ်ရပ်ပေါ်မှာ ချုပ်ချယ်တာက ကလေးကိုယုံကြည်မှုကင်းစေပါတယ်။ အန္တရာယ်မရှိနိုင်လျှင် လွှတ်ပေးထားပါ။ သင့်ကလေးက တစ်ခုခုကို ကြောက်နေလျှင် သူနှင့်အတူ သင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တရများနှင့် သင့်ရဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့ ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရမလဲဆိုတာအတွေ့အကြုံများကို မျှဝေပါ။
၇။ သူအရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေအကြောင်းကို သင့်ကလေးကို သတိပေးခြင်းဖြင့် သူ့ရဲ့ခွန်အားတွေကို လက်ခံယုံကြည်စေပြီး ပိုပြီးတောင်
အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာ သူ့ကို နားလည်သဘောပေါက်အောင် ကူညီပေးပါ။
၈။ သင့်ကလေးတစ်ခုခုလုပ်လို့ ရှုံးနိမ့်သွားတဲ့အခါ “ဒါကအဆင်ပြေတယ်! ” “ထပ်ကြိုးစားပါ” ” မင်းကိုငါယုံကြည်တယ်” “ဘယ်သူမှတော့ချက်ချင်းမရဘူး”
ဆိုတဲ့ဒီလိုစကားလုံးလေးတွေ သင့်ကလေးကို ပြောပေးသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကလေးကို “အောင်မြင်တဲ့လူတိုင်းက အမှားတွေ ရှိတတ်ကြပြီး အဲဒီ့အမှားတွေက တခြားအရေးကြီးတဲ့ အရည်အသွေးနှင့် သည်းခံမှု၊ ဇွဲလုံ့လရှိမှုကို တိုးတတ်အောင် ကူညီပေးတယ်ဆိုတာ” နားလည်အောင် သင်ပေးသင့်ပါတယ်။
အရေးကြီးဆုံးကတော့ သူ့ရဲ့ရှုံးနိမ့်မှုကို သူ့ကို သင်ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် တာဝန်ယူမှာ မဟုတ်ကြောင်းပြသပါ။
၈။ ကိုယ်တိုင်မုန့်လုပ်ရတော့ သမီး ဘယ်လိုခံစားရလဲ? ဒီနေ့အိမ်အလုပ်ဝိုင်းလုပ်ရတာ ဘယ်လိုနေလဲ? စတဲ့ မေးခွန်းများက မိဘနှင့်ကလေးအကြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ သူတို့ကိုလည်း သူ့ရဲ့အကြံဥာဏ်တွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့ လေ့ကျင့်ပေးရာ ရောက်ပါတယ်။
ဒေါ်လာ ၁၁၀၀ လောက် ကျသင့်မယ့် Apple ရဲ့ iPhone 8
ခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းသော ဆံကေသာအတွက် ပေါင်းတင်နိုင်မ...